[Review] Kem Tẩy Lông Huyền Phi tốt không? Mua Chính Hãng Ở Đâu? | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Kem Tẩy Lông Huyền Phi tốt không? Mua Chính Hãng Ở Đâu? | Muasalebang in Muasalebang
Ufuna ukugqoka izingubo zamahlombe ezi-sexy kodwa awukwazi ngenxa yezinwele emhlane wakho, izinwele eziningi endaweni. Ukuya e-spa ukuze ukhiphe izinwele kulezi zindawo nakho kuyabiza kakhulu. Ngakho, imikhiqizo yokususa izinwele nayo yazalwa. Kubandakanya ukhilimu wokususa izinwele we-Huyen Phi. Lolu olunye uhlobo ukhilimu wokukhipha izinwele okwamanje esetshenziswa abesifazane nabesilisa abaningi. Ngakho Ingabe ukhilimu wokususa izinwele we-Huyen Phi ulungile? Isihloko esilandelayo sizokusiza ukuthi uphendule yonke imibuzo mayelana nalo mkhiqizo wokukhipha izinwele.
1 Umsuka we-Huyen Phi ukhilimu wokukhipha izinwele
2 Izithako ze-Huyen Phi ukhilimu wokukhipha izinwele
3 Wenzani ukhilimu wokususa izinwele we-Huyen Phi?
4 Ungawusebenzisa kanjani ukhilimu wokususa izinwele we-Huyen Phi ngendlela efanele
5 Qaphela uma usebenzisa ukhilimu wokususa izinwele we-Huyen Phi
6 Ingabe ukhilimu wokukhipha izinwele we-Huyen Phi ukulungele ukusetshenziswa?
Umsuka we-Huyen Phi ukhilimu wokukhipha izinwele
Ukhilimu wokususa izinwele we-Huyen Phi ikhiqizwa yi-Huyen Phi Cosmetics Co., Ltd., egxile ekususeni izinwele nasekususeni izinwele. I-Perfect Clean Clean I-Huyen Phi Hair Removal Cream yenziwe ngefomula ethuthukisiwe ukuze ikusize ususe izinwele ezingafuneki ngobumnene, ngokuphepha nangempumelelo kunezindlela zendabuko, ukhawulela ukukhula kwezinwele kabusha kanye nobuhlungu obuvuthayo. Lo mkhiqizo uthenjwa amakhasimende amaningi ngoba uhlangabezana nezidingo zokususwa kwezinwele zabesifazane, okuphephile futhi okusebenzayo futhi izinwele azikhuli.
Izithako ze-Huyen Phi ukhilimu wokukhipha izinwele
Ngokusho kolwazi olunikezwe umenzi, izithako ku-Huyen Phi ukhilimu wokukhipha izinwele ziyinhlanganisela yamakhemikhali akwazi ukususa izinwele ezingaphezulu komzimba ngokushesha, okuhlanganisa: Amanzi ahlanzekile, i-Cetyl Alcohol, i-Thioglycolic Acid, i-Tocopheryl acetate, i-Allantoin, i-Calcium Hydroxide, i-Sodium. Hydroxide, Urea, Phenoxyethanol, Stearic Acid, Ceteareth-25, Glyceryl, Propylene Glycol, Isopropyl Myri tata, Perfume.
Ukhilimu Wokususa Izinwele we-Huyen Phi Unikeza Iseramu Yokususa Izinwele – Ukususwa Kwezinwele Okuphephile, Akukho Ubuhlungu, Ukunakekelwa Kwesikhumba Esithambile, HUYEN PHI
I-Veet Hand and Feet Removal Cream 100ml
[Mã FMCGMALL -8% đơn 250K] I-Cleo Avocado Ukususwa Kwezinwele I-Cream Isikhumba Esizwelayo 25g/50g, Cleo
I-Combo Seimy Hair Removal Cream – I-Pure Skin Perfect isusa zonke izinhlobo zezinwele unomphela futhi ngokushesha emizuzwini emi-5 nje, SEIMY
U-U MINH HA Ohlanzekile UVIKELA IZINWELE KUBAHOLI, Amakhwapha, Imiphetho Bikini Indawo Yangasese Isifuba Isisu Umzimba Ogcwele ekhaya…
I-VEET Silk & Fresh Sensitive Hair Removal Cream 50g
I-Cleo Avocado Removal Cream For Sensitive Skin 25g, iphephile, ayinabuhlungu futhi isebenza ngokushesha
Ukhilimu Wokususa Izinwele u-Huyen Phi – [MUA 1 TẶNG 2] – nikeza i-serum yokususa izinwele unomphela – Kemtaylong
I-MAMEN SHOP ukhilimu wokukhipha izinwele 120 ml ukususwa kwezinwele okuphephile ezindaweni zangasese, amakhwapha, imilenze, izandla kuze kube phakade
I-Russian Velvet Ukukhipha Izinwele Ukhilimu
Wenzani ukhilimu wokususa izinwele we-Huyen Phi?
Ngezithako zamakhemikhali eziphephile ezisetshenziswa kuzimonyo zobuhle ezibalulwe ngenhla, ukhilimu wokukhipha izinwele we-Huyen Phi unokulandelayo:
Ukususwa kwezinwele esikhumbeni kodwa akubangeli ukucasuka kwesikhumba, akubangeli ubuhlungu obuvuthayo.
Khipha amaseli esikhumba afile nama-pores
Inciphisa ama-pores futhi ingabangeli ukuvuvukala kwama-pore
Isiza ukwenza isikhumba sendawo yokususa izinwele sibe bushelelezi.
Khawulela ukukhula kabusha kwezinwele.
Ungawusebenzisa kanjani ukhilimu wokususa izinwele we-Huyen Phi ngendlela efanele
Ukuze umkhiqizo usebenze kahle futhi usebenze kahle, udinga ukwazi ukuthi ungawusebenzisa kanjani ukhilimu wokususa izinwele we-Huyen Phi ngale ndlela elandelayo:
Hlanza isikhumba ngaphambi kokuwakha. Kufanele usebenzise amanzi afudumele ukuhlanza isikhumba ukuze uvule izimbotshana ukuze wenze izinwele zikhiphe kalula.
Yomisa isikhumba sendawo esizogcotshwa ngethawula elithambile ukuze ugweme ukulimaza isikhumba ngaphambi kokufaka ukhilimu.
Faka ungqimba olu-1 lwe-Huyen Phi ukhilimu wokukhipha izinwele esikhumbeni ukuze ususwe
Nethezeka imizuzu emi-5 ukuya kweyi-10 ukuze ukhilimu ungene ezimbotsheni.
Okokugcina, sebenzisa ithawula elicwiliswe emanzini afudumele, sula, bese usula ukhilimu. Ngalesi sikhathi, izinwele zizolandela isiqondiso sokuhlanza.
Okokugcina, geza indawo osanda kuyi-wax ngamanzi abandayo ukuze uvale izimbotshana.
Qaphela uma usebenzisa ukhilimu wokususa izinwele we-Huyen Phi
Ngaphambi kokusebenzisa ukhilimu wokukhipha izinwele we-Huyen Phi, kufanele uqaphele izinto ezilandelayo ukuze umkhiqizo ukhuthaze umphumela wawo ogcwele futhi ugweme imiphumela emibi engadingeki:
Ungawufaki ukhilimu endaweni ozogcotshwa ngayo isikhumba sisamanzi
Ungashiyi ukhilimu esikhumbeni isikhathi eside, kungabangela ukucasuka
Ungafaki i-wax kaningi ngeviki, ukuze isikhumba sibe mncane. Kungcono ukuyisebenzisa kanye ngesonto.
Ungasebenzisi ukhilimu wokukhipha izinwele esikhumbeni esonakele esinobomvu, ikakhulukazi isikhumba esophayo.
Ungasebenzisi ukhilimu wokususa izinwele we-Huyen Phi ebusweni bakho ngoba isikhumba sishiswa yilanga kalula futhi sicasuka kalula.
Kufanele uhlole ukhilimu esikhumbeni sezandla noma ezinyaweni zakho ngaphambi kokuwusebenzisa kungakapheli amahora angama-24.
Ingabe ukhilimu wokukhipha izinwele we-Huyen Phi ukulungele ukusetshenziswa?
I-Huyen Phi ukhilimu wokukhipha izinwele unomphela kanye neserum yokususa izinwele muhle umbuzo ojwayelekile abantu abaningi abawubuzayo ngaphambi kokusebenzisa lo mkhiqizo. Mayelana nokusebenza ngempumelelo kokususwa kwezinwele esikhumbeni, ukhilimu wokususa izinwele we-Huyen Phi waziswa kakhulu. Ngokusebenzisa okumbalwa nje, izinwele zakho zingancishiswa futhi zithuthukiswe kakhulu. Nokho, kusenezimo eziningi zokucasuka kwesikhumba ngemva kokusebenzisa ukhilimu. Ukukusiza uzizwe uvikeleke kakhulu ngaphambi kokuthenga nokusebenzisa, Amathiphu Obuhle azoveza izinzuzo nezingozi zokhilimu wokukhipha izinwele. Nazi ezinye izinzuzo kanye nokubi ukhilimu okufanele ukwazi:
Njengamanje, kunezinhlobo eziningi ezahlukene zokhilimu bokukhipha izinwele emakethe. Kodwa ukhilimu wokukhipha izinwele we-Huyen Phi uhlale ukhethwa ngamakhasimende ngenxa yalezi zinzuzo ezilandelayo:
Imikhiqizo esebenzayo isiza abasebenzisi ukususa izinwele kalula ekhaya ngaphandle kokuchitha isikhathi nemali ukuya ku-spa.
Ayibangeli ubuhlungu, ukungakhululeki noma ukucasuka kwesikhumba.
Umkhiqizo uhlangabezana nezindinganiso zamazwe ngamazwe futhi unikezwa isitifiketi SOKUFIKELELA KOMKHIQIZO AMAZINGA ESEMAKETHINI esikhishwe NGEMPUMELELO UMNYANGO WEZEMPILO.
Nakuba, ukhilimu wokukhipha izinwele we-Huyen Phi unokusetshenziswa okuningi nesitifiketi esivela eMnyangweni Wezempilo mayelana nokuphepha, kodwa ukhilimu usenobubi okufanele uqaphele ukuze ugweme izimo ezingafuneki:
Ukhilimu okhipha isikhumba. Ngakho-ke, kufanele uyisebenzise kanye ngesonto noma kanye njalo emavikini angu-2 ukuze ugweme icala lesikhumba esincane esibamba ilanga kalula.
Izithako ezikukhilimu wokususa izinwele we-Huyen Phi zingamakhemikhali ikakhulukazi, ngakho-ke udinga ukuwuhlola esikhumbeni sakho ngaphambi kokuwusebenzisa endaweni enkulu.
Ngenxa yokwakheka kwamakhemikhali, kulula futhi ukucasula abanye abantu abanesikhumba esibucayi.
Ngokuvamile, kunemikhiqizo eminingi esiza abesifazane ukususa izinwele ngempumelelo kodwa Ukhilimu wokususa izinwele we-Huyen Phi Ihlala ithandwa ukusebenza kahle kanye nekhwalithi. Ngethemba ukuthi ngalesi sihloko uzoba nolwazi oluthe xaxa ngomkhiqizo futhi uphendule yonke imibuzo yakho.